स्वास्थ्यमा सुधार भएपछि प्रकाशमान सिंह डिस्चार्ज
काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंह स्वास्थ्यमा सुधार भएपछि आज डिस्चार्ज भएका छन् । गत सोमबार दिउँसो स्वास्थ्यमा समस्या भएपछि सिंह उपचारका लागि मेडिसिटी अस्पताल भर्ना भएका छन् ।
सिंहको उपचारमा डा. मिमि गिरी नेतृत्वको चिकित्सकको टोली सहभागी थियो । अझै केही दिन घरमै पुर्ण आराम गर्न चिकित्सकले सल्लाह दिएका छन् ।
घर फर्कने क्रममा सिंहले आफ्नो उपचारमाम संलग्न चिकित्सकहरुको टिम, अस्पताल ब्यवस्थापन, आफ्नो स्वास्थप्रति चासो राख्नु हुने स्वदेश तथा विदेशमा रहेका आफन्त, साथीभाइ, शुभचिन्तक पार्टीका नेता कार्यकर्ता, सबैप्रति हार्दिक आभारसहित धन्यवाद दिएका छन् । नेता सिंहले घर फर्के पनि केही दिन आराम गरेर पार्टीको काममा फर्किने योजना बनाएको युपी लामिछानेले जानकारी दिएका छन् ।
‘हाइ सुगर’, उच्च ज्वरो र पिसाबमा संक्रमण देखिएपछि सिंह अस्पताल भर्ना भएका थिए ।
नागढुंगाको जाम खुलाउन नसक्नु लाजमर्दो भयो - प्रकाशमान सिंह
काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले दुई तिहाइको बलियो कम्युनिस्ट सरकारलाई ‘उखाने’को संज्ञा दिँदै नागढुंगाको जाम पनि खुलाउन नसकेको भन्दै आलोचना गरेका छन् । काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नं. १ ले
सरकारले नागरिकको भरोसा गुमाउँदै गयो – प्रकाशमान सिंह
काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले सरकारकै कारण देशमा भ्रष्टाचार बढेको आरोप लगाएका छन् । सरकारको अलोकप्रिय कदमकै कारण यसले नागरिकको भरोसा गुमाउँदै गएको दाबी पनि उनले गरे । 'भ्रष्टाचार
काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंह स्वास्थ्यमा सुधार भएपछि आज डिस्चार्ज भएका छन् । गत सोमबार दिउँसो स्वास्थ्यमा समस्या भएपछि सिंह उपचारका लागि मेडिसिटी अस्पताल भर्ना भएका छन् । सिंहको
काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका नेता एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंह बिरामी भएपछि मेडीसिटी अस्पताल भर्ना भएका छन् । मधुमेह र ज्वरो बढ्नुका साथै पिसाबमा सङक्रमण देखिएपछि नेता सिंह सोमबार उपचारका लागि अस्पताल